Ciyaaryahan Soomaali ah oo ku biiray naadiga Southport FC - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Ciyaaryahan Soomaali ah oo ku biiray naadiga Southport FC
Ciyaaryahan Soomaali ah oo ku biiray naadiga Southport FC
Maxamuud inta uusan dhawaan ku biirin kooxda Southport FC oo ka ciyaarta horyaalka National League ee ka dheesha heerka lixaad ee hannaanka kubadda cagta ee Ingiriiska, wuxuu u ciyaari jiray kooxda Curzon Ashton Football Club ee ka dhisan gobolka Manchester ee waqooyiga Ingiriiska.
“Southport FC waxay iila muuqataa in ay tahay koox hore u socota, waxay heleen dhaqaale, waxayna isku dayayaan inay soo urursadaan ciyaartoyda horyaalka ugu fiican sida aniga Maxamuud Cali ah.” ayuu yiri Maxamuud.
Maxamuud waxa uu ku rajo wayn yahay inuu guul gaarsiin doono kooxdiisa cusub sidoo kalana uu gaarsiiyo tartamo waa weyn oo ay guulna ka soo hooyaan.
“Insha ALLAAH, sanadka hadda soo socda, waxaan rajeynaynaa inaan horyaalka ku guulaysano, oo koobab uu ka mid yahay FA-ga aan qaadno, marka mustaqbal fiican ayaan rajeynaynaa.”
Maxamuud Cali Maxamed ayaa waxa ay wadadhasheen Axmed Cali Maxamed oo ah kabtanka xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya, iyadoo Axmedna uu u ciyaaro kooxda Halesowen Town ee ka dhisan gobolka West Midlands ee bartamaha England.
Previous articleQarax lala beegsaday Ciidamo ka tirsan Puntland & faah faahin laga helay
Next articleSAWIRO:- Wafdi ka socda Dowladda Qatar oo gaaray Kismaayo